Resaky ny mpitsimpona akotry : matsiro ny saosy, korontana ao amin’ireo hery mitana fitaovam-piadiana | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : matsiro ny saosy, korontana ao amin’ireo hery mitana fitaovam-piadiana
Tsy misy andro tsy ahenoana na miaramilan’ny Tafika na zandary na pôlisy voarohirohy ao anatin’ny raharaha maloto. Maro angamba ny fitsabahan’izy ireny amin’ny fanaovana izao karazana asa ratsy rehetra izao, ka tsy ilaozan’izay iray sendra ny taolana. Fomba fiteny moa izany hoe iray izany, fa tsy mitsahatra izy ireo no mifandimbidimby ao amin’ny pejin’ ny vaovao mikasika seho mamoafady. Ary na manamboninahitra aza dia misy voasaringotra amin’izany, fa tsy vitan’ireny tratra amin’ny fanorana fiandrasana kendritohina amoron-dàlana. Matsiro ny saosy, samy milela-molotra arak’izay afany ka tsy ilaozan’izay ho sendran’ny patsa iray tsy omby vava. Ny fisakafoana tsotra izao aza misy ihany ny voambary raraka, mainka ho an’ireny manao be am-bosika sy rapa-dango miampy herisetra ireny.
Tsy misy afaka hilaza fa tratran’io aretina io daholo ny any anatin’ny Tafika sy Zandarmaria ary Pôlisy, fa raha ny fisehon’ny herotra mandraotra amin’izao fotoana izao dia ahihiana fa mafanafana ny aretina ary mifindra haingana eo amin’ny fifampikasokasohana. Samy olona izao ve dia hifampijery fotsiny ny sasany maimaina ny mandimandina mangiloilo mihitsy aza. Ny ao ambany mahatazana ny raha ataon’ny ao ambony, ny mpibaiko koa mahafantatra ny tsy mety ataon’ireo feheziny. Lasa miray vatsy akamban’ny ratsy mifankahita kilema sy mifankahalala heloka. Ny adidy iombonana tsy efa fa ny fianao ratsy samy manana ny azy no ihavanana. Tsy maintsy mitombo ny isan’ireo tratra noho izany ka ny hany dina dia izay tratra manefa. Iza anefa no tompon’andraikitry ny fanenjehana ny mpanao ratsy ? Mbola adidy ifampizarana koa izany. Eo izao no anton’ny isehoan’ ny disadisa, na mifandefitra ao anatin’ny fitsikombakombana, na manatanteraka adidy ka mety ho voaendrikendrika hoe manao tafahoatra. Izany izao no rahona manaloka eo amin’ ny fifandraisan’ny zandary sy pôlisy. Tsy atao ho olana anefa izany. Ny madio isan-tokatrano no afaka hisava hao any
amin’ny ankohonan’ny rahalahiny. Raha andrasana tsy hifampikosoka fa samy handilotra ny tsikoko amin’ny vatany tsy afaka antenaina ny fiverenana amin’ny fahadiovana. Ny fanambarana an’ireny isan’ny meloka nomena sazy tsy milaza ny fisian’ireo maloto sisa ambiny afaka madiodio tafatsofoka tamin’ny makarakara.